RecalBox: Iyo Yakajeka Retro Vhidhiyo Game Platform | Mahara emahara
Kana iwe uchitsvaga yakakwana system yekumisikidza yako wega multimedia uye varaidzo nzvimbo, saka RecalBox ndiyo chaiyo projekiti yaunoda. Iyo sisitimu iyo iwe yaunogona kuisa pane yako ndiro Raspberry Pi uye uve nechinhu chakachipa chekushandisa maawa mazhinji evaraidzo uri mumba yekutandarira kana imba yekutandarira yega.
Kana iwe ukaverenga Hwlibre, iwe unofanirwa kunge uchitozviziva izvo pane mikana yakawanda yemitambo ye retro, kubva zvimwe zvinhu zvekuunganidza yako Arcade muchina Homemade, even many many dzimwe nzira dzeRecalBox pachayo yebhodhi rako reSBC. Zvese zvinhu kudzoreredza iwo echinyakare emitambo yemavhidhiyo yetroom michina kubva kuNintendo, Atari, uye zvimwe zvakawanda. Ndicho chaicho chishongo chisingamiri kukwezva vatambi ...
1 Chii chinonzi RecalBox?
2 Isa RecalBox pane iyo Raspberry Pi
2.1 Zvakakodzera zvinhu
2.2 Isa RecalBox pane yako Raspberry Pi
2.3 Gadzira RecalBox
Chii chinonzi RecalBox?
RecalBox ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi sisitimu iyo inokutendera iwe kutevedzera yakawanda nhamba ye retro makomputa uye zvinyaradzo. Aya mapuratifomu ane huwandu hwenhema mitambo yemavhidhiyo iwe yaunogona ikozvino kudzoka nekutenda kune ino chikuva. Kunze kweizvozvo, RecalBox inogona kusiyaniswa kubva kune mamwe maitiro ehurongwa nekuti zvakare inobvumidza multimedia basa.
Kutenda kuna mamwe mapakeji e multimedia iwe uchave unokwanisa kugadzira wako mukuru muyananisi pamwe neiyo retrogaming chiteshi. Zvese mune imwe, pakati nepakati uye nyore. Hapana chikonzero chekushandisa akawanda masisitimu uye bhuti neimwe kana imwe yacho saNOOBS.
Kuwedzera pakuve wakakwana, zvakare gara uchigadzirisa Kutenda kunharaunda yayo inoshanda yevagadziri. Naizvozvo, iwe unenge uine mhinduro dzemabhugi, uye nekuvandudza kunogara kuchikosheswa zvechokwadi.
Kune zvese izvo, RecalBox inofungidzirwa imwe yemapuratifomu akanakisa yevaraidzo…
Kutora - RecalBox
Rimwe rematanho makuru mberi muchirongwa ichi kwaive kuuya kweiyo RecalBox 6.0 vhezheni. Izvi zvinofungidzirwa shanduko huru mukusimudzira yeRecalBox, uye izvo zvakashanda sehwaro hwekuburitswa kwazvino senge yakagadzikana vhezheni RecalBox 6.1.1 inova ndiyo ichangoburwa panguva yekunyora chinyorwa ichi.
RecalBox OS iri chaizvo a Kugoverwa kweGNU / Linux yakagadzirirwa multimedia uye kugadzirisa hurongwa sezvandambotaura. Iyo yakarongedzwa kuti ishandiswe paRaspberry Pi pakutanga, ichisvikawo kuOdroid uye x86 masisitimu mune vhezheni 4.1, uye kunyange midziyo.
Iyo projekiti yeFrance mavambo yakasvika kune imwe yemazita ayo mune iyi vhezheni 6.x, uko yaive yatokwanisa kutevedzera zana rekunyaradza uye masystem kuburikidza ne piFBA neRetroArch, pamwe neEmulationStation2.
Zvinosanganisira iyo ine simba Kodi yemultimedia, iine zvese zvakanaka zvinorehwa izvi. Iyo zvakare yaive neayo graphical interface yekuwedzera kugadzikana kufamba uye kutonga, uye basa rayo rakanaka rakaita kuti Raspberry Pi Foundation iritore seiri kuiswa mukati NOOBS uye kuve nevamwe vanogadzira vanoishandisa sehwaro hweforogo inonzi Batocera.linux (2016).
Kana iwe uchinetseka nezve kuenderana nemitambo yemavhidhiyondiko kuti, ndeapi mapuratifomu aanogona kuteedzera kumhanya ese anoenderana mitambo yemavhidhiyo, ipapo iwe unofanirwa kuziva iyo yakazara runyorwa iyo RecalBox yakave yakagadzirirwa:
Uye mamwe masisitimu ...
Isa RecalBox pane iyo Raspberry Pi
Kuti unakirwe neRecalBox yako usingashandise PC yako, unogona kuzviita zvakachipa neSBC bhodhi senge Raspberry Pi. Naizvozvo, kwemakumi mashoma emauro iwe unogona uve nehurongwa hwakazara kukwirisa varaidzo yako uye multimedia nzvimbo, kubatanidza ndiro iyi kuTV iri mumba yekutandarira ...
Chii unofanirwa kutenga kumisikidza yako arcade (kana iwe usati unayo) zvinotevera:
Raspberry Pi 3 (Zvinosuruvarisa, shanduro dzazvino hadzina kuwedzera rutsigiro rwePi 4)
Memory kadhi microSD angangoita 16GB
Simba adapter kuburikidza ne USB ye2.5A uye 5v simba.
HDMI tambo kuti ubatanidze iyo TV kana skrini.
Mutungamiriri wemitambo yemavhidhiyo inoenderana kana zvimwe retro iripo.
Raspberry Pi kesi kana dzimba (kusarudza).
Nenzira, vanotengesawo zadza makiti Chemhondoro kumabvazuva kweAukru kuva nebhokisi, heatsink uye simba adapteri yePi yako ...
Isa RecalBox pane yako Raspberry Pi
Paunenge uchinge uine zvese zvinhu, rinotevera danho ndere gadza RecalBox pane yako Raspberry Pi bhodhi nekutevera aya matanho akareruka:
Dhawunirodha RecalBox kubva ku zviri pamutemo webhusaiti. Ita shuwa yekusarudza iyo yakakodzera mufananidzo weplate yako modhi. Kana iyo .img yakamanikidzwa mu .zip iwe uchafanirwa kuisunungura.
Iye zvino unofanirwa kushandisa Etcher kupenya iyo microSD uye isa RecalBox pairi. Unogona kutevera izvi nhanho dzandakuratidza mune imwe chinyorwa.
Iye zvino, isa iyo microSD kadhi mune iyo slot yeRaspberry yako Pi uye, kana iwe ukabatanidza wiring yese, unogona kuibatidza kuti utange kubhowa ...
Kugadziriswa mushure mebhutsu hakutore nguva. Izvo zviri nyore kubva kumasystem system. Zvakare, kana iwe uine mutungamiriri we USB, unogona kuisanganisa uye ichatanga kushanda kana ikatsigirwa. Kana uri weasina waya, iwe unofanirwa kushandisa kabluu dongle yekubatana kwayo uye unomirira kuti izvizive… Iyo haina chakavanzika chakawandisa.
Kana iwe uchida ramba uchigadzirisa zvimwe zvinhu kubva kuKare, kana kubva kuRecalBox system pachayo, wakasununguka kuigadzirisa zvisinei iwe zvaunoda pane zvaunoda ...
Kana iwe uchida kuziva kuti sei isa maROM emitambo yako yevhidhiyo, Ini ndatsanangura kare chimwe chinhu mune imwe nyaya ino. Ndinongotarisira kuti iwe unofara!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » RecalBox: iyo yekupedzisira retro yemitambo chikuva
ADS1115: analog-dhijitari inoshandura yeArduino